မစ္စ "၏မျှော်နှင့်အသံ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery "(ဆောင်းပါး2၏ 2) - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » မစ္စ "၏မျှော်နှင့်အသံ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery "(ဆောင်းပါး2၏ 2)
မစ္စ "၏မျှော်နှင့်အသံ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery "(ဆောင်းပါး2၏ 2)
"အင့်အသတ်ခံ" ဟုအဆိုပါလေယာဉ်မှူးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် Adventuresses '' ကလပ်သို့ Peregrine Fisher က (Geraldine Hakewell) ၏ Unorthodox ဝင်ပေါက်ရိုက်ကူးကင်မရာသင်္ဘောသား မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery ။ (အရင်းအမြစ်: ကျွန်တော်တိမ်တိုက် Productions)
တိုင်းတိမ်တိုက် Productions '' မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery (ကလှည့်ဖျား-off အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mystery), အရာဧပြီလအပေါ်၎င်း၏အမေရိကန်ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း acorn တီဗီရဲ့ streaming ဝန်ဆောင်မှုအထူးသဖြင့်နက်နဲသောအရာကို-သည်းထိတ်ရင်ဖိုအမျိုးအစား၏ကျွမ်းကျင်သူအဘို့, အလင်းနွေရာသီစာဖတ်ခြင်း၏ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ညီမျှတူ၏။ ခန့် 1964 မဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျအတွက် Set, ပြပွဲအမြင်အာရုံစတိုင်, ရပ်ဆိုင်းမှုလိမ္မာပါးနပ်အရေးအသား, breezy ဟာသနှင့်ရိုးရာနှင့်အတူအချစ်ဇာတ်လမ်း၏ပင် dash ပေါင်းစပ် "သူတို့လိမ့်မည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မ" ခေါင်းစဉ်ဇာတ်ကောင်, ပုဂ္ဂလိကစုံထောက် Peregrine အကြားဆက်ဆံရေးဟာ Fisher က (Geraldine Hakewell), နှင့်ရဲစုံထောက်ဂျိမ်းသောမြင်း (ယောလဂျက်ဆင်) ။
စီးရီးဘို့အဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့အကြွေး '(ပြပွဲ၏သေံနှင့်စတိုင်တည်စေသူကိုပထမဦးဆုံးဒါရိုက်တာအမြင်အာရုံစတိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Fiona ဘဏ်များ, ပြပွဲရဲ့ "set-up, ဒါရိုက်တာ" ဆိုလိုသည်မှာစီးရီး) ကိုပိုင်ဆိုင်' '။ တစ်ဦးကဟောင်းကအယ်ဒီတာ, ဘဏ်များကိုပထမဦးဆုံးရာသီ ( "ပဲအသတ်ခံ" နှင့် "သောအရသာလူသတ်မှု") ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်များ helmed ။ ဘဏ်များသြစတြေးလျရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များအားလုံးအတှကျအဓိကဒရာမာစီးရီးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သူမအဘို့တီဗီဒရာမာနှစ်ခုသြစတြေးလျဒါရိုက်တာများအစည်းအရုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု (အကောင်းဆုံး Direction အဖွဲ့အနိုင်ရမယ့် Wentwortသားသမီးတို့ရဲ့ဒရာမာအတွက်ဇနှင့်အကောင်းဆုံး Direction အဖွဲ့ Mustang FC အသင်း) ။ သူမသည်လတ်တလောတွင်အမေရိကန် ABC ရုပ်သံစီးရီးတွင်လုပ်ကိုင်နေသည် ကျောက်တန်းလူငယ်များသို့.
ဒါရိုက်တာ Fiona ဘဏ်များ (အရင်းအမြစ်: IMDB)
သူမ၏ဦးတည်ချက်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ငါ၏အမေးခွန်းအတွက်အဖြေအတွက် မစ္စ Fisher က လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပြသထားတယ်ဘဏ်များငါရုပ်မြင်သံကြားတွေအများကြီးကြည့်ရှု "တုန့်ပြန်, အရုပ်ရှင်ကားနှင့် 60s ၏တီဗီရှိုးကလွှမ်းမိုးပေမယ့်, အဆုံး၌, ကထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဂန္ခြေ Hepburn ရင်ခုန်စရာဟာသ, အချို့ခဲ့သည် Charade, ရောမအားလပ်ရက်နှင့် တစ်ဦးသန်းခိုးယူဖို့ကိုဘယ်လိုသောငါ့အဘို့အများဆုံး resonated ။ ငါတကယ်ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်ကာလရုပ်မြင်သံကြား၏ဤမျိုးအတွက်အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအလင်းနှင့်စကေး၏အဓိပ္ပာယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ချင်ခဲ့တယ်, ကြှနျုပျတို့တတ်နိုင်သမျှကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ရက်ရော frame ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ DOP ကေသီကုန်သည်များနဲ့ကျွန်မဒီမှာမှောင်, moodier အစောပိုင်းကရာစုကမ္ဘာ့အရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် Adventuresses '' ကလပ်, မူရင်းစီးရီးမှပြင်လေးစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
"ကျွန်မရဲ့အလုပ်အတွက်ကွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ကျွန်မချဉ်းကပ်အတွက်အလွန်နိမ့်နည်းပညာဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံ! ငါသည်ဤလောက၏ရဲ့အဆိုးဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသကဲ့သို့ငါ ... သာအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးတန့်ပာဆောက်လုပ်သည့်အခါသူတို့ကိုအသုံးချနှင့်ကွက်ကိုအနုပညာရှင်လက်ဖြင့်သူတို့ကိုဆွဲရှိသည်။ ငါ Pre-ထုတ်လုပ်မှုတည်နေရာပေါ်ဓါတ်ပုံတွေအများကြီးကို ယူ. , သူတို့အားအတိအကျဘောင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမကြာခဏမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့အယ်ဒီတာသကဲ့သို့ငါ၏နောက်ခံငါ့ကိုအလွယ်တကူဘောင်နှင့်ဇာတ်လမ်းပာမြင်ယောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်, ငါအမြဲပြင်ဆင်မြင်ကွင်းများပိတ်ဆို့ပေမယ့်ရိုက်ကူး၏နေ့၌ထလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လိုနေတုန်းထင်ပါတယ်။
"ဟုအဆိုပါသရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်အလုပ်လုပ်ယခုတပြင်လုံးကိုဒါရိုက်တာဖြစ်စဉ်တွင်ငါ၏အကျောင်းအုပ်ကြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ, ထိုပြင်ဆင်ရန် suite ကိုထဲကလတ်ဆတ်တဲ့, ငါကတကယ်တော့ထိုအအံ့သြလောက်အောင်ထူးချွန်နှင့်ရဲရင့်တစ်ဦးချင်းစီမှငါ၏အကြံအစည်ကိုဖော်ပြ၏အလွန်စိတ်ကူး၏အနည်းငယ်ထိတ်လန့ထက်ပိုခဲ့ဝန်ခံ။ ငါသညျသှားခဲ့တယျအခြို့သောသရုပ်ဆောင်အတန်းပိုမိုကောင်းမွန်၎င်းတို့၏ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရန်နှင့်ပဲ ပို. ပင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွောကျတတျသောတက်အဆုံးသတ်! သို့သော်, ညွှန်ကြားချက်နှင့်ဘဝကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အတွေ့အကြုံ, နောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုပစ္စည်းများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ငါ့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုယုံကြည်စိတ်ချ လုပ်. , ကိုယ့်အမှုအရာမှတဆင့်စကားပြောလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ "
ဘဏ်များအပေါ်အလုပ်မလုပ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ် မစ္စ Fisher က အလွန်အကြိုးအတှေ့အကွုံဖြစ်။ "set-up, ဒါရိုက်တာအဖြစ်, ငါပြသ၏သတ္တုများပုံသွန်းအတွက်အသံဖြင့်ရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်ဝမ်းသာပီတိ, ကြှနျုပျတို့စုဝေးသရုပ်ဆောင်များ၏အမှန်တကယ်အလွန်အမင်းဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Geri [Hakewell] အလွန်ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးပြင် standout ခဲ့, သူဘားအလွန်မြင့်မားသောထားကြ၏။ ယောလ [Jackson က] ရာဇဝတ်မှုအတွက်သူမ၏စုံလင်သောမိတ်ဖက်ခဲ့, သူတို့သည်လည်းပဲနှစ်ဦးစလုံးအစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီအရှိဆုံးကြည်နူးဖွယ်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဖြစ်ပျက်။ Greg [ကျောက်ခေတ်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စစ်ဆေးရေးပါစီ Sparrow] နှင့်ကေတီ [Robertson က Constable ကော်] ကက်သရင်း [Birdie Birnside ကစားသူ McClements,], Toby [Truslove, ရှမွေလသည် Birnside] Louisa [Mignone, Violetta Fellini] တစ်ဦးဖန်တီးမှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် clutch ဖွဲ့စည်းခဲ့ သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကြောင်းသက်သေခံရန်ကြီးမားသောအပျြောအပါးများနှင့်အခွင့်ထူးဖြစ်ခဲ့သည်။
"ဒီသင်္ဘောသား ... ကောင်းစွာငါမတိုင်မီသူတို့ထဲကအများစုဟာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူး, သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောကြောင့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏။ ကေသီကုန်သည်များနဲ့ကျွန်မအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူး Wentworth, သူထိုအရပ်မှသူမ၏အမှုထမ်းအများအပြားဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဘင် Bangay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်နာ, Mid-ရာစုဒီဇိုင်းများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပြီး, ငါနှင့်အတူပူးပေါင်းထားသောအကောင်းဆုံးအများစုစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်နှင့်မဆုပ်မနစ်ဒီဇိုင်နာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလင်းဝီ, ငါတို့တောက်ပအယ်ဒီတာများ, ဘင် Joss နဲ့ Phil Watts အဖြစ်ဦးစီးဌာန၏အခြားအကြီးအကဲများ, ကိုလည်းဟောင်းရဲဘော်ရဲဘက်-In-လက်နက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဝတ်စုံဒီဇိုင်နာမာရီယာ Pattison ငါ့ကိုအားအသစ်သောမျက်နှာခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ကိုပြု၏။ အတူကစားရန်တော်တော်လေးအေးစည်း! "
ယခင်ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, မစ္စ Fisher က အခန်းဆက်အစဉ်အလာအထီးကြီးစိုးရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသမီးများကြီးထွားလာပါဝင်ပတ်သက်မှုထင်ဟပ်တစ်ခုခုဘဏ်များအားဖြင့်ကျေနပ်နေသည်။ "တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲအပေါ်တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းငါပိုပြီးမကြာခဏကျနော်နှစ်ပေါင်းများစွာလို့ပြောချင်ပါတယ်ထက်ကြုံတွေ့ဘူးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ငါသည်အပြည့်အဝကွာခြားမှုနှုန်းနေဆဲအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားလမ်းပိတ်နေပေမယ့်ထိုနေ့ရက်ကာလ, ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်မှယခုထင်ပါတယ်။ ထိုအမှုအရာတို့ကိုအင်္ဂါရပ်ကမ်ဘာပျေါတှငျသိသာအများကြီးပိုဆိုးဖြစ်ကြသည်။
"ငါ့တတိယသမီးရှိခြင်းပြီးနောက်, ငါ directing ထံမှထွက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ယူ. , အလေးအနက်ထားစဉ်အမြဲငါကိုငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြန်လည်စတင်ရန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အလွန်အထောက်အကူအထီးထုတ်လုပ်သူတစ်စုံတွဲငါ့ကိုပြန်အားပေးတယ်။ ဒါကြောင့်, ငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုကအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်, ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကဒီမှာလုပ်အလွန်ထိပ်တန်းဆင့်အစီအစဉ်များအချို့ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်အလွန်ကောင်းစွာငါသည်ဤအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းပကတိလူနည်းစုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိပေါ့။ ထိုအခါစက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝစွာကွဲပြားခြားနားကမ္ဘာ၏အပြည့်အဝကိုယ်စားလှယ်များမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပြောနေဒါရိုက်တာ၏အကွာအဝေးသေချာအတွက်သွားရမယ့်အလွန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိပါတယ်။ "
မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery ဆိုင်းထားခြင်းနှင့်အန်တရာယျအချိန်လေးအဖြစ်ပိုပြီးမထားဘဲ (နှင့်ရံဖန်ရံခါရင်ခုန်စရာ), ပေါ့ပါးတို့အကြားပြောင်းဖို့နိုငျသောဂီတလိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်ကောင်းစွာပြပွဲရဲ့ဟာသသေံကိုထောကျပံ့ဖို့ခေတ်ပုံမှန် melodies ။ သူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့, စီးရီးမဟုတ်တဦးတည်းလုပ်ကိုင်ပေမယ့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သောသူသုံးပါရမီ, ဆုရတေးရေး။
တေးရေးဆရာ Burkhard Dallwitz (အရင်းအမြစ်: ကျွန်တော်တိမ်တိုက် Productions)
သြစတြေးလျရဲ့ဦးဆောင်ဖုန်းမျက်နှာပြင် Composer တဦး, ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုရ Burkhard Dallwitz (နှစ်ဦးစလုံးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ကား 30 နှစ်ကျော်တဲ့ဝါရင့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါ Truman Show ကို, အဆိုပါလမ်းသို့ပြန်သွားရန်) နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဒရာမာ (အားနည်းချက်တွေ, ဝံပုလွေ Creek အဘိဓါန်, ထင်းရှူး Gap) ။ Brett Aplin ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်ရဲ့ (မြောက်မြားစွာ feature ကိုရုပ်ရှင်ပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦး afi နှင့်သြစတြေးလျမျက်နှာပြင် Music ကိုဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရမျက်နှာပြင်တေးရေးဆရာဖြစ်ပါသည် Deepsea စိန်ခေါ်မှု 3D), တီဗီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (Todd Sampson ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Hack) နှင့်သားသမီးရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား၏ 80 ဖြစ်စဉ်များအပေါ် (Mako မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း, မှော်အရာ၏ဗျူရို။ ) Dmitri Golovko feature ကိုရုပ်ရှင်အဘို့အတှေ့အကွုံမြားကိုတေးဂီတနှင့်အသံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ရှိပါတယ်, ကဲ့သို့သော အနီရောင်ဟေးလ် နှင့် အဆိုပါ Hitman ရဲ့သက်တော်စောင့် (အပိုဆောင်းဂီတ), တီဗီစီးရီး, ကြော်ငြာ, နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာ Aplin နှင့် Golovko ထံမှအချို့သော input ကိုရတဲ့အပြင် Dallwitz အင်တာဗျူးနိုင်ခဲ့သည်။
ငါတေးရေးများအတွက်ဂီတလုပ်နေတာချဉ်းကပ်ပုံကို Dallwitz တောင်းစတင် မစ္စ Fisher က။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဘို့အရှာနေဒါမှမဟုတ်သူတို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဇအတိုင်းနှင့်အတူလိုက်ကြဘူးအရာကိုအဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများ, ဒါရိုက်တာ, ဒါမှမဟုတ်စာရေးဆရာများထံမှတုံ့ပြန်ချက် get ပါသလား "အစောပိုင်းကျနော်တို့ကထုတ်လုပ်သူများ, အယ်ဒီတာများနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့်အတူစီးရီး၏ 'အသံက' 'ဆွေးနွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ" ဟုသူ "ဟုပြောသည်ကြောင့်ကျနော်တို့ slavishly 60s ရမှတ်များအတုယူရန်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးပိုမိုခေတ်မီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြုလုပ်ခဲ့သည် 60s နှင့်အခြားကျယ်ပြန့် retro လွှမ်းမိုးမှုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့ရှိသမျှတို့, ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်အဘို့ဤမျှလောက်ဒံယလေသ Pemberton ရဲ့အလွရမှတ်အများစုမှာ သမုဒ္ဒရာရဲ့က Eleven အခြားသူတွေအကြား 60s ခေတ်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရမှတ်မှ nods ခဲ့ကြသည်အဖြစ်နှင့်၎င်း၏ဇာတ်လမ်းများတစ်မှတ်ကျောက်ခဲ့ကြသည်။ ယာယီဂီတကဒီရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အယ်ဒီတာများကရွေးချယ်ကျနော်တို့အမှတ်ပေးစတင်ခဲ့သည့်အခါဒါ, လူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့ page တွင်ခဲ့သည်။ ခံခဲ့ရပါတယ် ထိုအရပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချနှင့်စတိုင်နှင့်ခေတ်မှကိုက်ညီမယ့်ရမှတ်မှလက်မှုပညာကို၎င်း, ဇာတ်ကြောင်းကိုထောကျပံ့ရနျကြှနျုပျတို့၏အတှေ့အကွုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲ, script များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းအတွက်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောခဲ့ကြသည် မစ္စ Fisher က ကမှုတ်သွင်းခံရဖို့ခဲယဉ်းမဟုတ်ခဲ့ကြောင်း။ ထိုအရပ်မှကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဒါရိုက်တာများကနေတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်အတူအားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်အထိတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "
ကဲ့သို့သောရှိုးဂီတဖန်တီးခြင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုများသည် မစ္စ Fisher က တေးရေးဆရာအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်အခြားစီးရီးမှနှိုင်းယှဉ် Dallwitz ရုပ်ရှင်အမှတ်ပေးများ၏ဘာသာစကားနှင့်ယာဉ်များ၏အများကြီးဘဏ်ဍာအမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်အတူဘုံအတွက် shared ဖြစ်ပါတယ် "ပြောတယ်, ဂီတ, ရုပ်ရှင်နှင့်အတူစာနာဖြစ်သည့်ဇာတ်လမ်းပြောပြထောကျပံ့များနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး၏ရူပါရုံကိုအစေခံဖို့ရှိပါတယ်။ အချို့စိန်ခေါ်မှုများပေးခဲ့တယျနေစဉ် 60s setting ကို, သို့သော်, ထိုသူအပေါင်းတို့ပျော်စရာခဲ့ကြသည်, ထူးခြားတဲ့ခဲ့! အဆိုပါကာလ setting ကိုကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသော '' သမားရိုးကျ '' ရမှတ်အပေါ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်မရမယ်လို့ခေတ်နှင့်ဆက်စပ်တူရိယာများနှင့်ကိရိယာသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား sandbox 'အတွက်ကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အတော်များများကမျက်နှာပြင်တေးရေးတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောရမှတ်၏စိန်ခေါ်မှုပျော်မွေ့နှင့်ဤအပေါ်အကယ်စင်စစ်အမှုဖြစ်ခဲ့သည် မစ္စ Fisher က။ "
တစ်ဦး 60s setting ကိုနှင့်အတူက setting ကိုတိုးပွားဖို့ခေတ်ကနေအသံသွင်းသုံးစွဲဖို့လုံးဝနီးပါးတာဝန်င် မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery ကြောင်းဦးစီးဌာနအတွက်စိတ်ပျက်မထားဘူး။ (အမေရိကန်ပရိသတ်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့အချို့အကျွမ်းတဝင် 60s ရော့ခ်စံချိန်စံညွှန်းများသြစတြေးလျအဖုံးကိုနားထောငျဖို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ) ငါလာသောအခါအဘယ်မှာရှိသနည်းပြပွဲရဲ့ရမှတ်များအတွက်လက်ရှိအသံသွင်းသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူသည် Dallwitz မေးတယ်။ "တကယ်တော့ဒီအများသောအားဖြင့်ဂီတကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်. အတွက်ဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူများဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "သူတို့ကလိုင်စင်ရဂီတဖြင့်လိုက်ပါသွားသင့်သောရုပ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဆုံးဖြတ်, ငါတို့သည်အရာကြွင်းသမျှဂိုးသွင်း။ ဒီအပြင်ရွေးကောက်တော်မူအမှန်တကယ်ပုဒ်စပ်လျဉ်းဆုံးဖြတ်ချက်များမကြာခဏလူသိများတဲ့အသံသွင်း hideously စျေးကြီးနိုင်ပါတယ်လိုင်စင်အဖြစ်ချကုန်ကျစရိတ်ထံသို့လာနိုင်တယ်။ "
ငါသည်အဘယ်သူ၏အလုပ်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ကိုတေးရေးသူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့တွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထားပါတယ်မေးတဲ့အခါငါတေးရေးကနေသုံးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုတယ်။ "ငါသည်အလွန်သောမတ်စ် Newman က, ဒါဝိဒ်သည် Buckley နှင့်ဂျက်ဖ် Beal ၏လုပျငနျးအရမ်းလေးစားမိပါတယ်" Dallwitz ကဆိုသည်။ "ငါ့ကိုသည်ယောဟန်ကို Williams ဟာအတိတ်သွားကြဖို့ခဲယဉ်းနေပါတယ်" Aplin ဒါဟာခေတ်သစ်ရုပ်ရှင်အမှတ်ပေး၏လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကတစ်ခုကွာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့် themes များအနေဖြင့်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ငါ့ကိုအနည်းငယ်ဝမျးနညျး "တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါခေတ်ကိုအနည်းငယ်ဟောင်းပေါ့ဒါပေမယ့်ဆရာယောဟနျ Williams က။ အကြောင်းအရာအလိုက်ရမှတ်များ၏မာစတာဖြစ်ပါတယ် "ထိုအခါ Golovko ရဲ့အဖြေခဲ့သည်" ကျွန်မရဲ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ဂီတသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟာဘား Herrmann နှင့်ဂျယ်ရီသမား၏အကျင့်အဖြစ် Johan Johansson နဲ့ Daniel Pemberton ခဲ့ကြပြီ။ "
နည်းပညာတိုးတက်မှုမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတေးရေးမရှိတော့သူတို့ရဲ့ရမှတ်များကစားရန်တစ်ခုတည်းကိုသာစတူဒီယိုဂီတသမားအပေါ်အားကိုးဖို့ရှိသည်နှင့်ယခုဂီတသူတို့ကိုယ်သူတို့ကစားနိုင်ပါတယ်။ "အပြင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလျှပ်စစ်နှင့် acoustic guitar တွေကိုလည်းမှတ်တမ်းတင် မှစ. , တောက်ပ Dave Herzog, များအတွက်ရမှတ်၏ကျန်၏ယဉ်ကျေး မစ္စ Fisher က နမူနာတူရိယာစာကြည့်တိုက်များနှင့်ဆင့်ခ်၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းအသုံးချဖို့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ, "Dallwitz ပြောတယ်။ "ကျနော့်စတူဒီယို Set-up Cubase 9.5 နှင့် Pro Tools များပါဝင်ပါသည် HD နှစ်ခု, Mac Pro ကိုဖွင့်ပေါ်ပြေး။ Pro ကို Tools များတစ်ဦးမှ QT နှင့်ချိတ်ဆက်လည်ပတ်နေမာစတာအဖြစ်ပြုမူ လွန်စွာလိုလားသော Cubase '' ရေးသား template ကို, Focusrite Rednet 24 မှတဆင့်ချိတ်ဆက်အားလုံး mirroring တစ်ဦး template ကိုရှိတယ်လို့ C5 ။ အဓိကစောင့်ကြည့်ရေးဆကျဆံရေးဆုံ SM9 နှင့် Genelec (SAM ကို 8331A) ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ "
"ငါသည် Apple က PC ကိုဗားရှင်းရပ်စဲမတိုင်မီပြန် Logic ကိုသုံးပါရန်အသုံးပြုနေစဉ်, ငါအရမ်းယခု Cubase ကိုသုံးပါ," Aplin တင်ပြသည်။ "နမူနာတူရိယာအကြီးအကျယ်ငါ့အကို Windows7မာစတာ PC ကိုဖြတ်ပြီးဗီယင်နာ Ensemble Pro နဲ့ဒုတိယကျွန်ကို PC အတွက်တည်ခင်းဧည်နေကြသည်။ တိုင်းအလုပ်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာစာကြည့်တိုက်များလိုအပ်နိုင်ပါသည်, VSL ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ woodwinds စာကြည့်တိုက်များ, Sonic Couture ရဲ့ Vibraphone, ထိုရုပ်ရှင်ရုံစတူဒီယိုစီးရီး Strings နှင့်ကြေးဝါ VSL ကနေဂျက်ဇ်ဂီတစည်ပစ္စည်းများဖော်ပြခြင်းမနှင့်ကိုစှဲဗုံသံသေချာအပေါ်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းတယ်နေစဉ် မစ္စ Fisher က။ "
"ရှေးခယျြမှု၏အကြှနျုပျ၏အဓိကဒေါ် [ဒီဂျစ်တယ်အသံကို Workstation] လည်း Cubase ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Golovko ကဆက်ပြောသည်။ "သို့သော်ကျွန်မ FL Studio ကအတူအတိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ဖွဲ့စည်းမှုဆန့်ကျင်အဖြစ်အဓိကအား software ကိုဆင့်ခ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဖန်တီးရန်။ ကျွန်မအနေနဲ့စာကြည့်တိုက်၏ခင်းကျင်းအဖြစ်ကိုယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောင့်ကိုယ်ပိုင်အသံအချို့ရှိသည် ဖြစ်. , ငါများအတွက်ရမှတ်များတွင်အသုံးပြုအချို့သောအရာ၏ မစ္စ Fisher က။ ငါသည်ငါ့အချို့ကိုအပေါ်ဂစ်တာဖျော်ဖြေနေစဉ် မစ္စ Fisher က တွေကို, ရမှတ်များအများစု created နှင့်အမျိုးမျိုးသောတူရိယာစာကြည့်တိုက်ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ "
ဒီအရေးအသားကမျှဆုံးဖြတ်ချက်ရှိမရှိကိုဖန်ဆင်းထားသည် မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery တစ်စက္ကန့်ရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ မူရင်း၏ပရိသတ်များ အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mysteryသို့သော်သူမ၏အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်ပွဲဦးထွက်အောင် 1920s sleuth ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ အလှမယ် Fisher က & မျက်ရည်များ၏ပေါ်က, အရာ Acorn TV ပေါ်မှာက၎င်း၏ streaming များလွှတ်ပေးရန်ရှိခြင်းရှေ့တော်၌ကန့်သတ်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းလွှတ်ပေးရန်ပေးလိမ့်မည်။ သူတို့အားလွှတ်ရာအတိအကျရက်စွဲများသေးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
Credit: ABC တီဗီကွန်ယက် acorn တီဗီ ခြေ Hepburn လွန်စွာလိုလားသော Brett Aplin Burkhard Dallwitz Cubase 9.5 Dmitri Golovko တိုင်းတိမ်တိုက် Productions Fiona ဘဏ်များ Geraldine Hakewell ယောလဂျက်ဆင် ကေသီကုန်သည်များ အလှမယ် Fisher က & မျက်ရည်များ၏ပေါ်က အလှမယ် Fisher ကရဲ့လူသတ်မှု Mystery မစ္စ Fisher ကယ့်ခေတ်သစ်လူသတ်မှု Mystery Pro ကို Tools များ, HD လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ်	2019-07-02
နောက်တစ်ခု: ကှတျချ S4 / i ချုပ်မှန်ဘီလူး Catch-22 အတွက်စစ်ပွဲ၏ကြောက်မက်ဖွယ်သိရှိစေရန်ကူညီ